လောင်းလုံးမြို့နယ်ရှိ လူငယ်စင်တာကို စစ်ကောင်စီ ဝင်ရောက် စီးနင်း | D Daily News
D Daily News
Home Local News လောင်းလုံးမြို့နယ်ရှိ လူငယ်စင်တာကို စစ်ကောင်စီ ဝင်ရောက် စီးနင်း
လောင်းလုံးမြို့နယ်ရှိ လူငယ်စင်တာကို စစ်ကောင်စီ ဝင်ရောက် စီးနင်း
တနင်္သာရီတိုင်း၊ လောင်းလုံးမြို့နယ်၊ ရေဖြူကျေးရွာရှိ လူငယ်စင်တာကို စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ ဇွန်လ ၂၅ ရက် ယနေ့နံနက် ၈ နာရီ ခွဲခန့်တွင် ဝင်ရောက်စီးနင်းရှာဖွေခဲ့ပြီး ဆိုင်ကယ် အစီး ၂၀ ကျော်ကို သိမ်းယူသွားကြောင်း စင်တာ တာဝန်ခံ ကိုဟိန်းထက်မှ ရန်ကုန်ခေတ်သစ်သို့ ပြောသည်။
“ဒီနေ့ မြို့နယ်မှာ အရေးပေါ်အခြေအနေတွေဖြစ်လာရင် ဆောင်ရွက်ဖို့ Medical Cover သင်တန်းနဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ လုပ်မှာ၊ ကျွန်တော်တို့ လပေါင်းများစွာ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ အသုံးပြုဖို့ စုဆောင်းထားတဲ့ စင်တာရှိ ပစ္စည်းများ (ပရောဂျက်တာ ၊ မီးစက် ၊ ဆိုလာ ၊ စားပွဲ ၊ ကုလားထိုင် အပါအဝင် တံမျက်စည်း အဆုံး) လူငယ်များ၏ ဆိုင်ကယ်အစီးရေ ၂၀ခန့်ကို စစ်ခွေးတွေ သိမ်းဆည်း သွားပါတယ်” ဟု ကိုဟိန်းထက်မှ ပြောသည်။
Youth Development Institute (YDI) လူငယ်စင်တာကို စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား ၃၀ ခန့်ဖြင့် လာရောက်ရှာဖွေခဲ့ပြီး နေ့လယ် ၁၂ နာရီဝန်းကျင်အထိ တောနင်းကာရှာဖွေနေဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းအပါအဝင် လူငယ်များ လုံခြုံသည့်နေရာတွင် ရှိကြောင်း သိရသည်။
Youth Development Institute သည် လူငယ် ဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းများ ပြုလုပ်ပေးနေသည့် နေရာ တစ်ခုဖြစ်သည်။
Previous articleဟားခါး ဒုမြို့နယ်မှူး ဇွပ်ဇွပ်အလုပ်မခံရဘဲ သူ့ စ ရိတ် နဲ့သူ ​ေ သ ဆုံး
Next articleကိုဗစ်က တစ်ကြော့ပြန်လာနေပါပြီ မပေါ့ကြပါနဲ့ ကလေးမှာတစ်ရက်ထဲနဲ့တောင်
ယာယီသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ မှ အလိမ်အညာ မင်းအောင်လှိုင်ထံ ပေးစာ (ကြမ်းပြီ)
နိုင်ငံ​​ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတစ်ဦး ဖခင်နာရေး ပြုလုပ်နေစဉ် စစ်ကောင်စီမှ
သူတို့က ပိုက်စိပ်တိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ သဘောပဲ
တိုင်းပြည်တကယ် ပျက်နေပါပီ မနက် ၅:ဝဝနာရီထိုးခါနီး
သွားနှင့်အုံးတော့ မိန်းမရေ ငါတို့သားလေးတောင် ရှင်မပြုရခင် မင်းသွားနှင့်တယ်နော်
အချင်းချင်းလက်၀ါးရိုက်ထားတဲ့ အစီစဥ္ကြီး ခုတော့ပေါ်ပြီ
မအလ နဲ့ နောက်လိုက်တွေ ဖွင့်မကြည့်ရဲတဲ့ ရုပ်သံဖိုင်
D Daily News is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry.
Contact us: contact@ddailynews.info
© Copyright © 2020 Mg Feeder. All rights reserved. Designed byMg Feeder.